PUBG chicken dinner REPLAYS (in 2D) – REDPlayer
PUBG မှာ ပွဲတစ်ပွဲကစားပြီးသွားရင် ပွဲတွေကို replay မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ (2D) နဲ့ကြည့်ချင်ရင်တော့ MinMax ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ indie website တစ်ခုကိုသွားကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ သူက ပွဲတွေကို 2D ပြန်ပြောင်းပြီးပြပေးထားဆိုတော့ မြေပုံတစ်ခုလုံးကို ခြုံပြီးမြင်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် animation လေးတွေလုပ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Chicken Dinner Live 2D
MinMax မှာကတစ်ခြား Slay the Spire, Subnautica တို့လိုတစ်ခြား ဂိမ်းတွေအတွက်လည်း tools တစ်ချို့ရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှာတော့ chicken dinner ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ မကြာခင်ကပြီးသွားတဲ့ပွဲတွေကို 2D ပြန်ပြပေးတာပါပဲ။ ပွဲများတဲ့ အခါ အကုန်တော့မတွေ့ရလောက် ပါဘူး။. အလွန်ဆုံးပွဲ ၃၀လောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။. Server တစ်ခုကိုပေါ့။ Server load ပြည့်သွားတဲ့အခါ ပြန်ဖျက်တယ်ထင်ပါတယ်။. mobile သမားတွေအတွက်တော့ မတွေ့ဘူး။ PC နဲ့ Xbox One သမားတွေကတော့ ကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆိုဝင်ကြည့်လို့ရပြီးတော့ setting တစ်ချို့လည်း ကလိလို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ server 16 ခုအထိတွေ့ရပါတယ်။Player တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလည်း ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ shroud တို့ chocoTaco တို့ပွဲတွေလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
PUBG မှာ ပှဲတဈပှဲကစားပွီးသှားရငျ ပှဲတှကေို replay မှတျထားလို့ရပါတယျ။ ဒါကိုပုံစံတဈမြိုးနဲ့ (2D) နဲ့ကွညျ့ခငျြရငျတော့ MinMax ရဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ indie website တဈခုကိုသှားကွညျ့လို့ရပါလိမျ့မယျ။ သူက ပှဲတှကေို 2D ပွနျပွောငျးပွီးပွပေးထားဆိုတော့ မွပေုံတဈခုလုံးကို ခွုံပွီးမွငျရမှာဖွဈသလို ကိုယျပိုငျ animation လေးတှလေုပျထားတာလညျးတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
MinMax မှာကတဈခွား Slay the Spire, Subnautica တို့လိုတဈခွား ဂိမျးတှအေတှကျလညျး tools တဈခြို့ရှိပါသေးတယျ။ ဒီမှာတော့ chicken dinner ဖွဈသှားတာပေါ့။ အလုပျလုပျပုံကတော့ မကွာခငျကပွီးသှားတဲ့ပှဲတှကေို 2D ပွနျပွပေးတာပါပဲ။ ပှဲမြားတဲ့ အခါ အကုနျတော့မတှရေ့လောကျ ပါဘူး။. အလှနျဆုံးပှဲ ၃၀လောကျပဲရှိမယျထငျပါတယျ။. Server တဈခုကိုပေါ့။ Server load ပွညျ့သှားတဲ့အခါ ပွနျဖကျြတယျထငျပါတယျ။. mobile သမားတှအေတှကျတော့ မတှဘေူ့း။ PC နဲ့ Xbox One သမားတှကေတော့ ကွညျ့လို့ရမယျထငျပါတယျ။ ဘယျသူမဆိုဝငျကွညျ့လို့ရပွီးတော့ setting တဈခြို့လညျး ကလိလို့ရပါလိမျ့မယျ။
ဒီစာရေးနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ server 16 ခုအထိတှရေ့ပါတယျ။Player တဈဦးနဲ့ တဈဦးလညျး ပွောငျးကွညျ့လို့ရပါတယျ။ နာမညျကွီးတှဖွေဈတဲ့ shroud တို့ chocoTaco တို့ပှဲတှလေညျးတှပေ့ါလိမျ့မယျ။
Tags 2D PUBG replays
February မှာရောက်လာမယ့် Dark Phoenix